नेपाल लाइभ | २०७५ असोज ४ बिहीबार | Thursday, September 20, 2018 ०८:१४:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं- सुनसरीमा एक शिक्षकको गोली हानेर हत्या गरिएको छ। उक्त घटना हुँदा घटनास्थलको १५ मिटर दुरीमा थिए, अभिनेता तथा फिल्म निर्माता नवल खड्का। उनले के देखे? के भन्छन् स्थानीय? उनकै शब्दमा :
भारतीय अतिक्रमण रोक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने ‘काँडेतार’ फिल्मको लोकेसन हेर्नका लागि हामी केही दिनदेखि यहाँ छौं । त्यही क्रममा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका परशुराम यादव लगायतका स्थानीय नेतासहित सिमाना नजिक पुगेका थियौं। गाडी गुडिरहेकै समयमा नजिकै पान पसल देखेपछि एक जना नेताज्यूले सुपारी खाने भन्दै गाडी रोक्न लगाउनुभयो। गाडी रोकिएको मात्रै के थियो, गोलीको आवाज आयो।
गोली हान्नेहरु मोटरसाइकलमा सीमातिर भागे। हामीले गाडी रोकेको १५ मिटरको दुरीमा गोली लागेर एक जना ढलिसकेका थिए। आँखैअगाडि घटना घट्दा एकछिन त पत्याउन मुस्किल भयो। घटनास्थल एकैछिनमा रक्ताम्य भयो।
गोली हान्नेलाई सीमामा रहेको नेपाली प्रहरीले रोक्न खोज्दा प्रहरीलाई नै गोली हानेर उनीहरु उम्केर भारततिर लागे। उनीहरुले गोली हान्नुको कारण खुलेको छैन।
स्थानीय स्कुलका प्रधानाध्यापक रहेका खुर्सिद अन्सारी स्थानीयका साह्रै प्रिय रहेको बुझियो। कसैसँग रिसइबी, लेनदेन र झगडा गर्ने स्वभाव नभएको स्थानीय बताउँछन्। अरुलाई नै तार्गेट गरेर हान्दा उनलाई लाग्यो कि? कसैलाई तर्साउन यस्तो गरियो कि? लगायतका अनेक आशंका स्थानीयहरुका छन्।
भारतीय विस्तारवाद विरोधी फिल्म यसअघि पनि बनाएको छु। फेरि पनि सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने विषय उठान गरेर फिल्म बनाउन खोजेकाले कतै हामीमाथि त लक्ष्य गरिएर पो गोली हानिएको हो? वा भारतको सिमाना मिच्ने प्रवृत्तिको विरोध नगर्न तर्साएको पो हो कि भनेर भनेर अनेक आशंका जन्मिएका छन्। सँगै डर जागेको छ।
सुपारी खान पसल नजिकै हामीले एक्कासि गाडी रोक्नु नपर्ने अवस्था हुँदो हो त उनीहरुले गोली हानेकै ठाउँनिर हाम्रो गाडी पुगिसकेको हुन्थ्यो। गाडीमा सवार हामी सबै संयोगले बाँचियो कि जस्तो लागेको छ।
केही समय त्यहाँ रहे पनि विभिन्न आशंका र त्रासका कारण हामी घटनास्थलबाट यतिबेला बाहिरिएका छौं।
खड्काले घटनास्थलमा खिचेको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
(डिबी खड्कासँग गरिएको कुराकानी)